Iswiiska - Muwaadin Isbaanish ah oo ku luglahaa qoor goynta dalxiisayaasha Marooko?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Iswiiska - Muwaadin Isbaanish ah oo ku luglahaa qoor goynta dalxiisayaasha Marooko?
Jebinta Wararka Safarka • Moroko News • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Maskaxdii iyo macalinkii ka caawiyay xubnaha ISIS ee Marooko inay dilaan kadibna ay qoorta ka jaraan 2 dalxiisayaal oo u kala dhashay Denmark iyo Norway ayaa laga yaabaa inuu haysto dhalashada labada dal ee Switzerland iyo Spain. Ardayga deenishka ah ee Louisa Vesterager Jespersen, oo 24 jir ahayd, iyo 28 jir norwiiji ah oo la yidhaa Maren Ueland ayaa maydkooda laga helay meel cidlo ah oo lagu tamashleeyo oo ku taal buuraha High Atlas, ee koonfurta magaalada Marrakesh bishii Diseembar 17.
Maskaxdii iyo maskaxdii caawisay Xubnaha ISIS ee Morocco in la dilo oo markii dambe madaxa laga jaro 2 dalxiisayaal ah oo ka kala yimid Denmark iyo Norwey ayaa laga yaabaa inay labo dhalasho u kala leeyihiin Switzerland iyo Spain. Ardayga deenishka ah ee lagu magacaabo Louisa Vesterager Jespersen, oo 24 jir ah iyo Maren Ueland oo norwiiji ah oo 28 jir ah ayaa laga helay meydkooda meel cidlo ah oo lugeynaya oo ku taal buuraha High Atlas, ee koonfurta magaalada Marrakesh bishii Diseembar 17.
Muwaadin u dhashay Switzerland oo dhigaya aaladaha isgaarsiinta ee ku lug leh tikniyoolajiyadda cusub iyo tababbarka argagixisada ee astaanta astaanta ayaa la qabtay Wuxuu ku nool yahay magaalada Marrakesh.
Hay'adda la dagaalanka argagaxisada ayaa intaas ku dartay inuu ku biiray "fikirka xagjirnimada" iyo sidoo kale inuu haysto dhalasho Isbaanish ah.
Baaritaanka socda ee ku saabsan dilka laba-geesoodka ah ayaa shaaca ka qaaday ninkan inuu ku lug lahaa “qoritaanka Marooko iyo Saxaaraha ka hooseeya si ay uga fuliyaan qorshayaasha argagixiso ee Morocco.
Xariga Sabtida kahor, maamulka Morocco ayaa horey u xiray 18 qof oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin dilka.
Afarta tuhmane ee ugu waawayn ayaa laga qabtay magaalada Marrakesh waxayna ka tirsanayeen qol ku dhiiri galiyay fikirka kooxda islaamiga ah ee Daacish, sida uu usbuucan u sheegay madaxa ladagaalanka argagixisada ee Morocco Abdelhak Khiam.
Marooko, oo ku tiirsan dakhliga dalxiiska, ayaa la kulantay weerar jihaad ah sanadkii 2011, markii qarax bam uu ka dhacay maqaaxi laga cunteeyo oo ku taal fagaaraha caanka ku ah Marrakesh ee Jamaa El Fna waxaa ku dhintay 17 qof oo u badan dalxiisayaal reer Yurub ah.
Weerar ka dhacay caasimadda dhaqaalaha ee gobolka Waqooyiga Afrika ee Casablanca ayaa lagu diley 33 qof 2003.
magaalada Casablanca jinsiyadda isgaarsiinta counter deenishka, dhintay December Denmark double Yurub European tourists dhaqaale helay dakhliga waxyoonay baaritaan ku lug leh Islaamka dilaan dilay links lab Marrakesh xubnaha morooko Morocco buuraha dil dil North Norway Norway socda qorshooyinka qorista spain Spain Ardayga tuhmanayaasha SWITZERLAND Switzerland technology argagixiso argagixiso argagixisada qalab tababarka